तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, डा भट्ट्राईको टीममा उनि र परिक्षण हुन बाँकी केहि व्यक्ति बाहेक अधिकांस ‘खली खाएका’ गजेटेड भ्रष्ट्राचारीहरु छन । के गर्दा पैसा बन्छ, त्यसको ‘भुगोल, ईतिहास’ यिनिहरुलाइ कन्ठै छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले औपचारिक सवारी साधान ‘मुस्ताङ्ग म्याक्स’ घोषणा गरेपछि शुरु भएको तरङ्ग अझै थामिएको छैन । विभिन्न व्यक्तिले यसलाई फरक फरक तरीकाले टिप्पणी गरे । कसैले यसलाई ‘स्वाङ्ग’ र ‘ढोङ्ग’को रुपमा चर्चा गर्न खोजे भने कोहीले यस्तो टिप्पणी गर्नेहरुको ‘जिव्रो थुतुँला’ जस्तो समेत गरे । निराशाको कालो बादल लागि रहेको वेला सानो भन्दा सानो कामबाट पनि जनतामा आसा जगाउन सकिन्छ भने यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गरिरहनु आवस्यक छैन, समर्थन नै गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री जीको सपथ ग्रहणको दिन ‘मुस्ताङ्ग म्याक्स’संगै सभासदलाई राखेर फोटो खिच्ने सायद म मात्रै थिएँ, यसको कारण जनतालाई स्वाद लागेको कुरामा जनताका प्रतिनिधिहिरुले ‘सेलिव्रेट’ गर्न कञ्जुस्याँई गर्नु हुन्न भन्ने हो ।
तर जे कुरा पनि अति भयो भने खति हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका टीमका केही मानिसहरुले यसलाई ‘लोक रिझांई’को ‘तुरुप’ बनाउन खोजे जस्तो महसुस हुँदैछ ।
चर्चामा आयो– भएको जापानी गाडी वेचेर ‘सस्तो’ भारतीय गाडी किन्ने रे ! अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे रे, केही मन्त्रीले आप्mनै गाडी चढ्ने रे !! राम्रो कुरा हो कसैले भने, कसैले प्रधानमन्त्रीको कारण नैतिक दवाव बढेको तर्क गरे । फेरी सुनियो– हैन, ‘सदाचार र सादगी’को नाममा झेल हुँदैछ । त्यसैले हिजो मैले फेसबुक स्ट्याटसमा लेखें-‎’सस्तो गाडी किन्ने, सस्तो सवारी साधन प्रयोग गर्ने’ नारा आफैंमा गलत होइन । तर यसबाट-भरतीय “थोत्रे” गाडीले शहर भरिने र अरु वातावरण प्रदुषित हुने खतराबाट अर्थका हाकिमहरु सतर्क रहुन । सरकारले आफुले प्रयोग गर्ने गाडीमा भन्सार नलगाउने हो भने अहिले तोकिएको ३० लाख सिमा भित्र “गतिलै” गाडी आउछ। यस्तो स्थितिमा “सस्तो” को यो हल्ला किन? मैले बुझ्न सकिन है साथी हो !
अचम्म-अचम्मका िटप्णाीहरु मेरा फेसबुके साथीहरुले गरे । यो व्लग तयार पार्ने वेलासम्ममा ७० जना यसमा सामेल भए भने ३० जनाले गरे िटप्पणाी ! केहीका टिप्पणी त यस्ता थिए – मानौं म हाम्रा महान प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र निर्माणको सुकर्ममा बाधा पारीरहेछु !! त्यसैले फेरी मैले फेरी टीप्णाी गरें- “मेरो विचारमा, राम्रो काम गर्ने नेताले ‘गोरु गाडा चढ्छ्न् कि रिक्सा, टांगा चढुन् की घोडा’ जनताले पर्वाह गर्दैनन् । जनहितको काम फुर्तीसाथ गर्ने हो भने हाम्रा मन्त्रि प्रधानमन्त्री जापानि गाडीमा हैन हेलिकोप्टरमानै उड्दा पनी जनताले वा-वा! गर्नेछ्न् । पहिले नै किनिसकेको गाडी अहिले ‘कौडीको’ भाउमा वेचेर “नयाँ र सस्तो किन्न” फेरी पैसा किन खर्च गर्ने! प्रश्न सदाचार र ईमान्दारीता को हो, महंगो र सस्तो गाडीको हैन । तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, डा भट्ट्राईको टीममा उनि र परिक्षण हुन बाँकी केहि व्यक्ति बाहेक अधिकांस ‘खली खाएका’ गजेटेड भ्रष्ट्राचारीहरु छन । के गर्दा पैसा बन्छ, त्यसको ‘भुगोल, ईतिहास’ यिनिहरुलाइ कन्ठै छ । १०० मुसा खाएर ‘हज’ गर्न हिंडेको विरालो जस्ता यी मनुवाहरुले प्रमको ‘मितव्ययी’ बन्ने नारालाई लागु गर्न ‘भएका गाडी बेच्दा र नयाँ सस्तो किन्दा’ दुबै चोटी कसरी कमिशन लुड्याउने भन्नेमा ‘विद्यावारिधी’ नै गरेका छ्न् । यहि टीमका खै कुन चांहि मन्त्रिले हो, प्रमलाई साथ दिन सरकारी गाडीको सट्टा आफ् नै गाडी चड्ने घोषणा गरे रे; पछी त्यो निजि गाडी मर्मतको लागि भनेर रज्यसंग १४ लाख लिए रे! यस्ता छन्, सदाचारीहरु !
एक जना साथिले त म कति रुपैया पर्ने गाडी चड्छु भन्ने पनि सोध्न भ्याउनु भो, सरकारलाई यति साह्रो ‘वान साइडेड लभ’ पनि नगरौं की?! मेरो बारेमा हिसाव- किताव गर्ने वेला आएछ भने त्यो त्यतिखेरै गरौंला! अहिले चाहिं राम्रो गर्न चाहनेहरु ‘राम्रो गर्ने नाममा धरापमा नपरुन’ भन्ने सम्म हो !